Chii chinonzi Real-Nguva Kubhidha (RTB)? | Martech Zone
Chii chinonzi Real-Nguva Kubhidha (RTB)?
China, Gunyana 17, 2015 NeChishanu, Gunyana 18, 2015 Douglas Karr
Mune zvese zvakabhadharwa zvekutsvaga, kuratidza uye kushambadzira nhare, pane yakawanda hesera yekutenga zvionekwe pairi. Kuti uwane mhedzisiro yakasimba, iwe unofanirwa kunge uri kuyedza kutengwa kwemazana kana kunyange zviuru zvemisanganiswa yemazwi pakutsvaga kwakabhadharwa. Kana iwe uri kuratidza kushambadzira kana kushambadzira nhare, iyo hesera inogona kupararira pakati pemazana kana zviuru zvemasaiti kana maapp.
Chii chiri Chaicho-Nguva Kubhidha?
Kuti utarise nemaoko uye kubhidha panzvimbo dzaunoda kushambadza hazvingagone. Kugadzirisa izvi, kubhadharwa kwekutsvaga uye kushambadzira kushambadzira kunoshandisa chaiyo-nguva kubhidha (RTB) Neye-chaiyo-nguva kubhidha, mushambadzi anoisa zvipingamupinyi zvekushambadzira kwavo uye bhajeti yavo, uye iyo sisitimu inotaurirana pakuiswa kwega kwega mune yechokwadi-nguva okisheni inoitika nguva pfupi.
RTB inogona kuve inoshanda uye ine njodzi. Kana usiri mushandisi ane ruzivo, haugone kumisikidza zvisungo pakutenga kwako kushambadziro uye kurasikirwa nebhajeti yako nekushambadzira pane isingabatsiri kiyi musanganiswa kana panzvimbo dzisina basa. Kuitwa mushe, zvakadaro, kugona kwe RTB uye kushanda kwazvo kupfuura chero kupindira kwebhuku.
Yechokwadi-Nguva Kubhidha Yakafambira Mberi?
Big Data mapuratifomu ayo anogona kubvisa nekushandura mamirioni ezvinyorwa uye chaiyo-nguva - kusanganisira dudziro dhata - iri kubatsira kufambisira mberi RTB kupfuura kungodzora mitengo yebhidha uye kuwedzera kudzvanya-kuburikidza nemitengo. Nekuongorora data rekushandurwa mune chaiyo-nguva, vashanyi manas, uye kunyange muchinjikwa-maitiro maitiro, mapuratifomu eRTB anokwanisa kunyatso kufanotaura kuiswa kweyekushambadzira chaiko, panguva yakakodzera, pamberi pemunhu chaiye, pane chaipo mudziyo.
Takataura nezve chaiyo-nguva kubhidha kugona mukati Chirongwa Kushambadzira pane yedu yazvino podcast naPete Kluge. Ive neshuwa yekuteerera iyo podcast - yaive hurukuro huru.
Teerera kune yedu Kubvunzana kwaPete Kluge weAdobe
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Real-Nguva Kubhidha
Heino yakajeka mhedzisiro yeReal-Nguva Kubhidha mune infographic.
Vhidhiyo kubva MediaMath.
Tags: kushambadzira kushambadzirakuratidza kushambadzirakubhadhara pakukandappcchaiyo-nguva kubhidhartb
Nzira yekuwedzera PPC Kushambadzira ROAS Mune mashanu Maminitsi neGoogle Analytics
13 Nzira dzekutarisa Yako Ratidza Kushambadzira